Ekuphileni kwethu kwansuku zonke kufanele cishe iyiphi wekhaya ngeke akwenze ngaphandle abasizi balo abathembekile: zasendlini. abameleli Modern wobulili fair babe nje cha fanele bono kanjani ukuba ukhuthazele futhi isikhathi sokwenza yonke into, hhayi kokuba njalo ngakwesokunene ezifana zikagesi kwesokudla kettles, amafriji, driers Electric, Amathosta, blender, vacuum cleaner omkhathi futhi imishini yokuwasha. Ekugcineni sixoxa kabanzi.
Namuhla ezimakethe imishini yokuwasha wukuthi abakhiqizi kukhona ukulwa esiwusizo wonke amakhasimende. inkampani ngayinye ekhiqiza imishini yokuwasha, uzama nomunye imodeli entsha ukuthuthukisa imikhiqizo yayo, ukwengeza eminye imisebenzi emisha ewusizo futhi ngesikhathi esifanayo uzame hhayi ukwandisa intengo yemikhiqizo yabo.
Minyaka yonke, izincwadi ehamba phambili ukuthi ukugxila ngale ndaba, wenze sohlelo imishini yokuwasha. Yiqiniso, wonke umakhi ufuna imikhiqizo lakhe ibingamashumi ezingeni eliphakeme futhi osebenza ku kulo mzamo.
Ngakho, uma ukulahlekelwa futhi abazi ukuthi hlobo luni okuzenzakalelayo "umsizi" ukuthenga ikhaya noma ukunikeza umuntu, khona-ke kufanele uhlole sohlelo imishini yokuwasha ngokuya nokwethenjelwa. Lolu hlu luqukethe ulwazi kuhlanganise izibuyekezo zamakhasimende, esevele esetshenziswa imishini yokuwasha. Ngesisekelo imibono yabo, kanye imicabango yabantu uchwepheshe, futhi lahlelwa kulesi silinganiso. Ngaphezu kwalokho, imiphumela yokugcina zalotshwa futhi imishini yokuwasha, okuyinto libuyekeza zanikezwa kude eyodwa sesevisi. Kuyinto imfihlo ukuthi zonke sesevisi noma uwuyise lapho uzolungiswa khona uqhuba izibalo zayo on ukuvama iloli imifanekiso ehlukene, lezi idatha nazo kubonelelwe imiphumela yokugcina.
Kuphinde kuvule isilinganiso imishini yokuwasha yethu Miele zikagesi inkampani. Le nkampani German abadumile amadivayisi kwaso nokwethenjelwa emangalisayo. Miele imishini yokuwasha Nokho abasakwazi eqolo kuqhathaniswa ukuphumula, kodwa uma ucabanga ngakho, intengo akazange overstated, ngoba ukuphila inkonzo imishini yokuwasha lenkampani kufana engaba-ngamashumi amathathu! Ayikho enye inkampani ekhiqiza isimangaliso ubuchwepheshe, abakwazi ukuqhosha miphumela.
Siyaqhubeka uhlu lwethu imishini yokuwasha nasendaweni ukukhiqizwa Spanish zenhlangano Bosch yesibili. Yiqiniso, lezi amayunithi abakwazi ukuqhosha ukuphila okunjalo nje umshini we Miele, kodwa bonke abasizi efanayo, futhi ezifuywayo Bosch nazo lizinga izinga at an ngentengo eqolo.
umshini wokuwasha, okuyilona elisebenzayo futhi simo ngempela high, ekhiqizwa Zanussi futhi Electrolux izinkampani. Kungani ezimbili nje? Kulula ngokwanele, iqiniso lokuthi bobabili zenziwa kusukela izingxenye efanayo futhi, njengoba umthetho, lo imodeli iyafana. Ngo nokungakhethi, siphawula ukuthi ukuba Zanussi, Electrolux futhi - ngempela abakhiqizi futhi okuthembekile imishini yokuwasha lezi zinkampani bekusolo ngesikhathi ibambene izinga Yakha ukuqina umsebenzi.
indawo Okwesine sinezizathu kwesokudla sibuyela inkampani Siemens. Umthengi electronics umakhi ukuthi bekulokhu abadumile njalo ukuthembeka kwabo, imishini yokuwasha nabo bayajabula. Intengo kuhle futhi izinga okusezingeni eliphezulu - impumelelo lo mkhiqizo. Yilokho kuphela uma unquma ukuthenga umshini wokuwasha Siemens, khumbula ukuthi uma kwenzeka ukuwohloka, akuzona zonke inkonzo sizakwenza ukulungisa yayo kanye umklamo eyinkimbinkimbi, futhi uthole imininingwane akulula neze.
Ukuqoqa out imishini yethu phezulu egeza yasekhaya abasizi inkampani Ardo. Lawa izimpahla lenkampani Chinese. Isihluthulelo sempumelelo lezi imishini yokuwasha simiswe ngalendlela lelandzelako: izinga eliphezulu kakhulu, kodwa intengo kunalokho ongaphakeme kuqhathaniswa mncintiswano, yingakho imishini yokuwasha Ardo uthandwa kangaka.
Lena uhlu emihlanu abakhiqizi onokwethenjelwa kunayo yonke imishini yokuwasha. Kuyaphawuleka ukuthi sidalwe ngesisekelo idatha eziningi, kodwa ekugcineni, yini umshini wokuwasha ukuthenga, kukuwe.
Yeka ukuthi kuhluke kanjani ibizwa ngokuthi izinkanyezi Ukudutshulwa ngabantu abamelelwa yizo